မှတ်ပုံတင်ခြင်း လမ်းညွှန် - ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောဘဝအတွက် ဗောဓိ တရားအားထုတ်ခြင်း
1. ဗောဓိ တရားအားထုတ်ခြင်းသည် လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အောက်ပါအခြေအနေများရှိသည့် လူတစ်ဦးချင်းစီအား ခွင့်ပြုရန် မဆောင်ရွက်ထားပါ –
(2) စိတ်ရောဂါရှိခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်ရောဂါဖြစ်ပွားဖူးသည့် မှတ်တမ်းရှိခြင်း
(3) စိတ်ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ရူးခြင်း
(5) ပြင်းထန်သော နှလုံးရောဂါ
(7) မိမိ အခြေခံလိုအပ်ချက်များအတွက် ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု မလုပ်နိုင်သူ (ဥပမာ၊ ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသည့် ကျောင်းသားများသည် အဖေါ်ပါသင့်သည်)
2. လူတိုင်းတွင် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိပြီး တရားအားထုတ်ခြင်းသည် မည်သည့်ယုံကြည်မှု သို့မဟုတ် လူမျိုးကိုမှ မကန့်သတ်ထားပါ။ ၎င်းသည် ဒဿနိကဗေဒ၊ သဘာဝသိပ္ပံနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကို သာလွန်ကောင်းမွန် စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်ဘာသာမှမဆို၊ မည်သူကိုမဆို လက်ကမ်းကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံး ဆန္ဒမှာ သင် ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ခြင်းကို မြင်တွေ့လိုခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
3. ကျွန်ုပ်တို့သင်တန်းများသည် အများအားဖြင့် အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အသုံးပြုသည့်နေရာနှင့် သင်တန်းကာလ ပေါ်မူတည်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကိုပေးဆောင်နိုင်ရန် အခါအားလျော်စွာ အခကြေးငွေပေးဆောင်ရနိုင်သည်။ သင့်တွင် ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အား ကြင်နာစွာဆက်သွယ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား စီစဉ်ပေးရခြင်းကို လိုလားပါသည်။
4. သက်တောင့်သက်သာရှိစေခြင်းအတွက် ကျောင်းသားများသည် ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းပေါ်တွင် တိကျသည့် လိုအပ်ချက် များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ စင်တာတွင် အထူးတလည် ပုံစံထုတ်ထားသည့် ဝတ်စုံများကို ၀ယ်ယူရရှိ နိုင်ပါသည်။
5. သင်တန်းအတွင်း တရားအားထုတ်သည့်ခန်းမသည် အလွန်အေးနိုင်သည်။ ကျောင်းသားများ သက်တောင့်သက်သာ ရှိရန်အတွက် ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင် ရှောစောင်များ၊ အပေါ်အင်္ကျီများနှင့် ခြေအိတ်များကို ယူဆောင်လာရန် တိုက်တွန်း နှိုးဆော် ပါသည်။
6. ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ရန်နှင့် မလိုအပ်သည့်အမှိုက်သရိုက်များကိုလျော့ချရန် ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင် စားသောက်သည့် အိုးခွက်ပန်းကန်၊ သောက်ရေခွက်များနှင့် ထည့်စရာများကို ယူဆောင်လာရန် တိုက်တွန်း နှိုးဆော် ပါ သည်။
7. စင်တာတွင် ကျောင်းသားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းထားရန် ယာယီသိမ်းဆည်းနိုင်သော ဗီရိုများ ရနိုင်သော်လည်း လူ့တန်ဖိုးကို အချိန်တိုင်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်။
သတ်မှတ်ထားသည့်ဒေသအတွင်းတွင် တရားအားထုတ်သည့်စင်တာများသည် ဒေသတွင်း တရားရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဓလေ့ထုံးစံများကို လိုက်နာရမည်။ ထို့ကြောင့် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် လိုအပ်ချက် များသည် စင်တာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကွဲပြားနိုင်သည်။ တိကျသောအချက်အလက်များ ပိုမိုရရှိရန်အတွက် သင့်ဒေသတွင်း ဗောဓိတရားအားထုတ်သည့် စင်တာတွင် ကျေးဇူးပြု၍ စုံစမ်းပါ။
ဗောဓိတရားအားထုတ်ခြင်းသည် သာမန်ထက်ထူးခြားသည့်အခြေအနေများတွင် ကျောင်းသားများမှ လျှောက်လွှာများကို ငြင်းဆန်ရန် အခွင့်အရေးသီးသန့်ထားရှိသည်။